Mudo Kordhin Aan Dastuurka Waafaqsaneyn Macnaheedu Waa Khiyaamoshacab Oo Noqonaysa “Dhabarka Ii Xoq Aan Kuu Xoqee” – somalilandtoday.com
Mudo Kordhin Aan Dastuurka Waafaqsaneyn Macnaheedu Waa Khiyaamoshacab Oo Noqonaysa “Dhabarka Ii Xoq Aan Kuu Xoqee”
A) Habraacii wadashaqeyneed ee ay la yeelan lahayeen Golaha Baarlamaanka si Baarlamaanku xeerarka saami qaybsiga u curiyaan
B) Dar-dar gelintii iyo dib u furistii Diiwaan gelinta Codbixiyayaasha si howshu u kala socoto oo mudada qorshe hawleedku u soo gaabato
E) Waxay ka gaabiyeen
dhamaan wada shaqeyntii Waaxyaha qaranka waayo way arkaayeen saansaanta mudo kordhinta ee ay la sugeen waqtigan xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ee ay ku dhawaaqeen in doorashadu dib u dhaceyso. waxay aheyd in ay 6 bilood ka hor sii iclaamiyaan liiska codbixiyayaasha iyo jidwalka habsami u socodka hawlaha Diiwaan gelinta codbixiyayaasha.
C) Waxay ku fashilmeen ku dhaqankii waajibaadkii Dastuuriga ahaa ee ay Kuraasta Baarlamaanka ku baneyn lahaayeen maadaama mudo xileedkoodii uu dhamaaday.
A) in ay dabo galaan Xeerarka Baarlamaanku miiska hoostiisa uu dhigay ee ay diyaarin waayeen mudada dheer.
B) Waxay ku fashilmeen Miisaaniyada Doorashooyinka ee komishanka qaranku u soo gudbiyey ee ay qaybtooda soo dhameystiri waayeen.
C) Madaxweynuhu wuxuu ka gaabiyey Isfahan la’aantii ay is fahmi waayeen asxaabta qaranka ee mucaaridka ah.
Maadaama Doorashooyinkii dib u dhaceen .
Doorashooyinka mar kasta dib u dhacaaya ee aan waqtigooda lagu qaban waxay Saameyn xoogan oo taban ku yeelanaysaa Sumcadii iyo karaamadii Somalilaan waxaana ay ka dhigaysaa Sawirkii guud ee Somalilaan qorax madow oo sii dhacaysa. Waxay aheyd in aanay ciida ku rafan ee Komishanka doorashooyinku 6 bilood ka hor ay is cadeeyaan oo ay sii sheegaan in doorashadu dib u dhacayso.. Waxaa ceeb iyo fadeexad qaawan inagu ah in Doorashada Baarlamaanku ay 5-jeer dib u dhacdo halka Dawlada Federaalka Somaaliya ay 3 doorasho baarlamaan qabsatay halka inaga ay hal baarlamaan ina hor fadhiyeen 13 sanadood. Maadaama Sababta ugu weyn ee Doorashooyinku dib ugu dhaceen ay tahay Xeerarka cakiran ee Saami qeybsiga kuraasta Baarlamaanka oo mudo dheer ay ansixin waayeen golaha baarlamaanku waa in uu madaxweynuhu arintaa soo fara geliyaa oo go’aan adag ka qaataa si doorashadu waqti dhow ugu qabsoonto.
Waxaan ku soo garoocayaa qormadan : Shacaboow Tiraa Kaa Gedmane Wax isu geygeyso ” !!